Better World EdVidiyo na-enweghị okwu na akụkọ gbasara mmụta mmadụ
Gịnị Mere Vidio Na-enweghị Okwu
Pịa & Njirimara mgbasa ozi
Chọgharịa Akụkọ zuru ụwa ọnụ
Nye ego na ebuka
Nye Kaadị Onyinye
Nweta Gear dị mma
Ndi mmadu, ndi mmadu, ndi ozo & nke ozo
Azụmaahịa na akụnụba
Onye ndu, Community & Civic
Ahụike, ịdịmma na nri
Mmụta na Schoollọ akwụkwọ
Amamihe, Ọnọdụ ime mmụọ & Okpukpe
Nkuzi, Mmụta na agụghị akwụkwọ
Mmesho & Data
Ntughari & Nkewa
Mgbakwunye & Mwepu
Mmesho & Geometry
Mgbakwunye & Mwepu n'ime 100
Ebe Bara Uru
Nghọta, Nkwukọrịta & Mmekọrịta
Nzube Onye edemede
Ihe osise mmanya
Na-agbakwunye 1s na 10s
Akụkụ nke ọdịdị
Ntinye tinye na onu ogugu 2
Nsogbu okwu na-abawanye ole na ole
Mmụta mmekọrịta ọha
eme ugbu a
Inwe Ekele Dị Iche Iche Na ezọ Ndụ
Nlekọta ndi mmadu
Ele echiche & Global Mmata
Ọmịiko, Nghọta & Ntị
Nkwanye Othersgwù Maka Ndị Ọzọ & Mmepe Ọdịmma
Jiri mmadụ mee ka mmụta Better World Ed
Kụzie mgbakọ na mwepụ nke ndụ n'ezie, mmuta, ọmịiko, mmata zuru ụwa ọnụ, ịchọ ịmata ihe, na ịbụ onye. Site na akụkọ ụwa 150+ ka mma.
WATA EZIOKWU NDỤ BAỊMỤTA
Anyị bụ ndị anaghị akwụ ụgwọ na ozi iji mee ka mmụta mmadụ dị mma.
Anyị na-emepụta akụkọ ndụ n'ezie maka ụwa ka mma.
Dakọtara na agụmakwụkwọ.
Kuziere ịmata ihe karịrị ikpe. Na-eche karịa okwu. Nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ. Gburugburu ụwa.
Mee mgbakọ na mwepụ na ịgụ akwụkwọ dabara adaba. Akụkọ gbasara mmadụ na-akpa mmetụta ọmịiko na agụmakwụkwọ.
Na-akwalite njikọ na ihe onwunwe. Ebumnuche na ihe ọ pụtara. Creativity na imekọ ihe ọnụ.
Better World Ed Na-enyere ndị ntorobịa aka
Ọ na-amasị m ịmụta banyere anyịselị hụrụ,
ibe anyị, na ụwa anyị.
Tinye mgbakọ na mwepụ na mmuta
na ndụ n'ezie, dabara adaba.
Zụlite ọmịiko na ọmịiko
iji mebie nkewa ma wuo ihe.
Reweave akwa nke
oke mmadu anyi.
Mee ka mmụta karịa mmadụ.
N'ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, na ndụ.
Nweta akụkọ 20 edere na atụmatụ nkuzi iri abụọ jikọtara ya na ọtụtụ vidiyo enweghị okwu zuru ụwa ọnụ!
Ibe edokwubara & mepụta ndetuta ọkpụkpọ gị!
kwa onye nkuzi kwa afọ
(kwa ọnwa, na-akwụ ụgwọ kwa afọ)
$42.00 kwa otu / afọ
ọzọ ọrụ, ala na-eri
Ụlọ akwụkwọ / Onye nkụzi / Aha nne na nna
# Ndị nkuzi
Nlele na nyocha
Nweta 50 ejiri nlezianya họrọ Akụkọ Odide na 50 Ihe Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ nke jikọtara ọtụtụ nke Vidio Na-enweghị Atụ nke Global!
$72.00 kwa otu / afọ
Nweta vidiyo 50+ enweghị okwu, akụkọ 150+ na atụmatụ nkuzi 150+ sitere na mba iri na anọ!
Nweta njem mmụta mmụta niile na-abịa abịa na ọdịnihu na nkeji!
Nweta atụmatụ nkuzi puru iche iji kwado maka akuko anyi nile!
Kachasị & dị omimi di omimi di iche-iche!
Nyocha kachasị mma & chọgharịa ahụmịhe!
Tinye akwụkwọ akụkọ & mepụta ndepụta ọkpụkpọ ahaziri iche!
$100.00 kwa otu / afọ
Nweta oghere ọhụrụ iji hụ mgbakọ na mwepụ,
mmuta, ibe anyi na uwa anyi.
Anya oghere ọhụrụ ịhụ mmadụ ekekọrịtara anyị.
Jiri kpalie Ijuanya gafere Okwu Better World Ed
Jiri koodu MMADỤ na ndenye ọpụpụ maka 40% kwụsịrị maka ndụ - maka gị ma ọ bụ nke zuru oke onyinye!
Vidiyo gụnyere asụsụ. Na-akpali ihe ịtụnanya karịrị okwu. Nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ.
Ịgụ agụmagụ zuru ụwa ọnụ
Akụkọ gbasara ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ọdịnala gụnyere.
Maths bara uru
Zaa "kedu ka ihe a si eme n'ụwa?" Ezigbo agụmakwụkwọ.
Gbanwee echiche na ịma aka ọnụ.
Ezi Ndụ mmụta
Kwakọba mgbakọ na mwepụ, agụmagụ, ọmịiko na mmata zuru ụwa ọnụ ọnụ.
Akụkọ iji mebie nkewa mgbe a na-ewuli mmetụta ọmịiko na njikọ.
N'ụwa niile bara uru
Chọgharịa isiokwu zuru ụwa ọnụ dị mkpa n'ime mmadụ, nke nwere ike ịkọwa, ụzọ dabara adaba.
Vidiyo na-akpali akpali
Kpọkọ ndị mmụta wee jiri akụkọ ndụ mmadụ na-eche echiche nke ọma.
“Mma nke Better World Ed bụ na vidiyo na akụkọ na-enweghị okwu nwere ike ịbanye n'ime usoro ọmụmụ anyị dị ugbu a. Ọ bụghị “ihe” ọzọ a ga-akụzi. Better World Ed bụ otu anyị si ewulite ikike nke ndị mmụta anyị niile itinye aka na mmetụta ụwa site na usoro ọmụmụ dị ugbu a."
LEE IHE ỌZỌ KWESỊRỊ
Chọgharịa, Chọọ, na Nzacha Vidiyo na-enweghị Okwu & Akụkọ ụmụ mmadụ maka ụwa ka mma
Vidiyo na-enweghị okwu na akụkọ mmadụ maka ụwa ka mma.
Ngbanwe zuru ụwa ọnụ, dabara na omenala yana asụsụ gụnyere.
Jiri ndetu egwu egwu chepụta njem mmụta ụwa gị ka mma.
Chọgharịa Akụkọ karịrị narị na iri ise na ise
Gbalịa akụkọ abụọ n'efu!
Ihe ngosi nkuzi ụwa ka mma
ỌKWỤKWỌ pọdkastị na atụmatụ
Anyị bụ ndị mmụta ogologo ndụ, ndị nkuzi na ndị na-akọ akụkọ ụwa ka mma na-ekepụta ọdịnaya mmadụ nke anyị chọrọ ka anyị nwee dịka ụmụaka.
N'ihi gịnị? -enweghị ọchịchọ ịmata tupu ikpe, ikike anyị nwere ịhụ ibe anyị dị ka ndị pụrụ iche, ụmụ mmadụ, ndị mara mma na-amalite na-agbagha.
Nke a na-eduga n'ọkpụkpụ n'ime na n'etiti anyị.
Knots nke na-eduga anyị imeso ụmụ mmadụ ndị ọzọ na ụwa anyị n'ụzọ na-adịghị mma na ọmịiko.
Better World EdAkụkọ ndụ mmadụ n'ezie na-enyere anyị aka ịtọghe oghere ndị a wee weghachi obodo.
KEDU BETTER WORLD ED ỌR.
Akụkọ ụwa ọ bụla ka mma na-akpakọ mgbakọ na mwepụ, mmuta, ọmịiko, ihe ịtụnanya, mmata zuru ụwa ọnụ na nghọta omenala ọnụ.
Vidio A NA-ADAGHORD AMA banyere ụmụ mmadụ pụrụ iche n’ụwa niile. Kụzie na -amụta ọchịchọ ịmata tupu ikpe na afọ ọ bụla.
Kemgbe ụwa, ịtụnanya. Ihe miri emi.
Akụkọ ụmụ mmadụ na ajụjụ site na ndị enyi ọhụrụ anyị na enweghị vidiyo. Kpaa mmetụta ọmịiko, mgbakọ na mwepụ, ịgụ na ịgụ na inwe.
Nghọta bara uru. Akụkọ ụwa ka mma.
Atumatu nkuzi uwa ka mma jiri vidiyo na akụkọ dị mkpa maka agụmakwụkwọ. Ihe, nka, mmeghari, egwu & ihe ndi ozo.
Mkparịta ụka ọmịiko. Mmekọrịta okike.
Akụkọ ụwa ka mma ga-enyere anyị aka itolite mmata, ịchọ ịmata ihe, mmetụta ọmịiko na ọmịiko.
Ihe okike, echiche siri ike, imekọ ihe ọnụ na njikọ.
Maka ndu. Nwatakịrị, K-12 & Okenye.
Akụkọ ka mma n'anya mmụta maka ndụ
Iji chọọ echiche dịgasị iche iche. Ihe ịma aka. Gbaa echiche ọjọọ n’agha. Kwụsị ikpe. Na-agba ajụjụ.
Tonabata mmetụta uche anyị kpamkpam.
Iji juo onu na ihe mgbagwoju anya anyi di iche-iche.
Iji hụ ibe anyị. Iji ghọta ibe ha.
Iji webata mmadụ n'ime klaasị. N'ime ụlọ akwụkwọ anyị.
Iji weta ụmụ mmadụ na agụmakwụkwọ.
Nmikpu zuru ụwa ọnụ na nke ime ka ịhụ n'anya ịmụta banyere ya self, ndị ọzọ, na ụwa anyị.
Iji mụta ịhụ n'anya self, ndị ọzọ na ụwa anyị. Maka ụwa ka mma.
Ịmụta mmadụ n'ụzọ ka mma
Better world education maka anyị òkè mmadụ.
Maka obi, uche, ahụ, na mkpụrụ obi anyị.
Maka ọgwụgwọ, ịdị n'otu, na bi na ubuntu.
Nzube. Ọ pụtara. Ebube. Onye nwere.
BETTER WORLD ED VIDIO iji weghachi mmadụ
Akụkọ zuru ụwa ọnụ ka ọ bụrụ mmadụ na-eche echiche na-emeghe oghere dị n'ime na n'etiti anyị. Iji megharia akwa nke obodo.
Akụkọ ụwa ka mma iji weghachi mmadụ n'ime agụmakwụkwọ.
Nweta akụkọ ka mma nke ụwa
Lee ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ na-atụgharị uche na vidiyo na akụkọ ndị na-enweghị isi maka ụwa ka mma.
Nụrụ n'ọnụ ndị nkuzi
Ka anyị webata mmadụ na agụmakwụkwọ maka ụwa ka mma.
Ka anyị tinye ọmịiko n'ime klaasị na mmụta ụlọ.
Ka anyị hụ oke mmadụ.
Maka ụwa ka mma, anyị aghaghị.
Ọtụtụ n'ime anyị tolitere na-enweghị nkwado iji mee nghọta.
Ghọta ụdị mmadụ dị iche iche, ọdịbendị, mmetụta, uche, echiche & ụzọ ndụ.
Ingghọta nke anyịselị hụrụ.
Ghọta ụmụ mmadụ anyị na-ekerịta.
Enweghị nkwado iji mee ọchịchọ ịmata ihe n'ihu na karịa ikpe.
Enweghị nkwado iji ghọta nke ọma.
Kama, agwara anyị na anyị nwere oke mmetụta.
Ọtụtụ n'ime anyị tolitere n'enweghị nkwado iji nwee mmasị n'ịmụ maka ndụ.
Learnmụta ịhụ n'anya na ndụ.
Iji wuo ụwa ka mma.
Izi ihe nke ukwuu.
Ntuziaka ezughị ezu.
Nrụgide dị ukwuu na "ịmara".
Ezughị ịhụnanya maka ajụjụ.
Ntị ezughị ezu.
Ọtụtụ enweghị mmasị.
Ọmịiko ezughị ezu.
Ukwuu “egosila mmetụta”.
Enweghi mmetụta zuru ezu.
Ukwuu “dị ike”.
Oke “ị nweghị ike ịgbanwe ihe niile”.
Ozughị "ANY can nwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla".
Ọtụtụ ezigbo ụwa.
Ezughị oke ka mma ụwa.
Ikwu echiche nke ukwuu.
Ezughị obi na-enye obi ụtọ.
Agụmakwụkwọ dị anyị mkpa maka obi anyị. Maka ụwa ka mma.
Na-enweghị ewulite mmetụta ọmịiko na ọchịchọ ịmata ihe anyị, ikike anyị nwere ịhụ ibe anyị dị ka mmadụ pụrụ iche, nke zuru oke, nke mara mma na-amalite na-akpaghasị.
Nke ahụ na-eduga n'ịgba aka n'obi anyị, iji ike emegbu mmadụ, ajọ mbunobi, na ajọ mbunobi.
Ikpe. Diskpa oke. Mbibi. Esemokwu.
Ime ihe ike na agha n'ime obi na uche anyị.
N’echiche anyị, n’okwu anyị, na n’omume anyị.
Gbalị iji amamihe na echiche ọhụrụ dozie nsogbu ụwa anyị nwere ike ịdị mma, mana ọ bụ naanị ogologo oge.
Anyị nwere ike ịhe ọhụụ iji kesaa nri anyị niile na ego anyị niile, mana ogologo oge ole nke a ga-adị na udo ọ ga-eweta ma ọ bụrụ na anyị ejidere ịkpa ókè, ikpe, ajọ mbunobi, amaghị ama, ma ọ bụ ịkpọasị n'ime obi anyị niile uche?
Ya mere akụkọ ụwa ka mma ji dị mkpa maka onye ọ bụla n'ime anyị, afọ 2 na karịa:
Lovehụ ndụ mmụta niile n'anya self, ndị ọzọ, na ụwa anyị.
Learnmụta ịhụ n'anya self, ndị ọzọ, na ụwa ka mma.
Iji ghọta nke anyịselves na ibe ha site na anyị niile gbagwojuru anya ma mara mma òkè mmadụ.
Iji mụta idozi esemokwu. Nwee udo na anyịselves na ndị ọzọ.
Ime ka ikpe kwusi ma hu ibe anyi anya. Iji humanize. Iji rịọ mgbaghara. Iji gwọọ ọnụ.
Ka anyị mepụta ụwa ka mma site na ezigbo akụkọ mmadụ na ajụjụ ndụ buru ibu.
Mmalite nke ndụ, ụbọchị ọ bụla, na ebe niile.
Ka anyị kpochapụ eriri ndị dị n'ime na n'etiti anyị.
Ka anyị regharịa akwa nke obodo anyi.
Ka anyị rụgharịa ụwa ka mma.
Ka anyị site na isi banye n'obi.
Ka anyị nwee udo.
Ka anyị B WE.
Jikọọ Better World Education taa.
Ajụjụ ụwa ka mma maka ndị ntorobịa:
Ọ bụrụ na anyị niile jiri vidiyo na akụkọ na-enweghị okwu mụta maka ụwa ka mma site mgbe anyị dị afọ 2, ọ bụla nke ụwa anyị nwere ịma aka ọbụna dịrị?
Anyị na-emepụta vidiyo na-enweghị okwu & akụkọ mmadụ maka ndị ntorobịa
inwe mmasị na ndụ niile ịmụ banyere self, ndị ọzọ, na ụwa anyị.
Better World Ed bụ 501 (c) (3) anaghị akwụ ụgwọ ("Reweave, Inc.").
Debanye aha, Ndị nkuzi nkwado, na inye imeghari mmadu.
Ihe Mere Anyị Ji Dị & Mmetụta Anyị
Nye A Otu
Ngwaahịa ụwa ka mma
Kwado Akụkọ Ọhụrụ
FAQs & Akwụkwọ Enyemaka
Nabata otu anyị (PD na ndị ọzọ)
© Copyright 2022 Better World Ed (Reweave, inc.) | Ka anyị mee ka mmụta mmadụ
Ka anyị weghachi obodo | Ka anyị B WE
XAnyị na-eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na imeghachi nlegharị anya. Site na ịpị “Nabata”, ị kwenyere na iji kuki niile. adịghị sell ozi nke m. GỤKWUONabataHọrọ ọpụpụSettings
__stripe_mid 1 afọ Stripe na-edobe kuki kuki a ka ọ hazie ịkwụ ụgwọ.
__stripe_sid 30 nkeji Stripe na-edobe kuki kuki a ka ọ hazie ịkwụ ụgwọ.
JSESSIONID nnọkọ New Relic na-eji kuki JSESSIONID iji chekwaa ihe nchọpụta nnọkọ ka New Relic wee nwee ike nyochaa ọnụọgụ nnọkọ maka ngwa.
Onyeka Onwenu 30 nkeji laravel na-eji laravel_session mata ihe atụ nnọkọ maka onye ọrụ, enwere ike ịgbanwe nke a
ts 3 afọ PayPal na-edobe kuki a iji mee ka azụmahịa nwee nchebe site na PayPal.
___ 3 afọ PayPal na-edobe kuki a ka ọ kwụọ ụgwọ nchekwa site na PayPal.
nlele_cookie_policy 1 afọ A na -edobe kuki site na ngwa mgbakwunye GDPR Kuki iji chekwaa ma onye ọrụ ahụ ekwenyela n'iji kuki. Ọ naghị echekwa data nkeonwe.
XSRF-AKK 30 nkeji Wix debere kuki a ma ejiri ya maka ebumnuche nchekwa.
givebutter_ session 2 awa Enweghị nkọwa
wp_woocommerce_session_eadf5e9ac70b75cf60bdd37a0be90552 2 ụbọchị Enweghị nkọwa
NIDI 6 ọnwa A na-eji kuki NID, nke Google setịpụrụ, maka ebumnuche mgbasa ozi; ibelata ugboro ole onye ọrụ na-ahụ mgbasa ozi, mebie mgbasa ozi achọghị, yana tụọ ịdị irè nke mgbasa ozi.
_ga 2 afọ Kuki _ga, nke nchịkọta Google arụnyere, na -agbakọ onye ọbịa, nnọkọ na data mkpọsa yana na -edekwa ojiji saịtị maka akụkọ nyocha saịtị ahụ. Kuki ahụ na -echekwa ozi na -enweghị aha ma nyefee ọnụọgụ enweghị usoro iji mata ndị ọbịa pụrụ iche.
_Ugo__gtag_UA_50467616_2 1 nkeji Google tọọziri iji mara ndị ọrụ.
_gid 1 ụbọchị Nchịkọta Google arụnyere, _gid kuki na -echekwa ozi gbasara ka ndị ọbịa si eji webụsaịtị, ebe na -emepụtakwa akụkọ nyocha nke arụmọrụ webụsaịtị ahụ. Ụfọdụ data anakọtara gụnyere ọnụọgụ ndị ọbịa, isi mmalite ha, na ibe ha gara na nzuzo.
vuid 2 afọ Vimeo na-etinye kuki a iji nakọta ozi nsochi site na ịtọ NJ pụrụ iche iji tinye vidiyo na webụsaịtị.
__utmc nnọkọ Nchịkọta Google na-edozi kuki ahụ ma na-ehichapụ ya mgbe onye ọrụ mechiri ihe nchọgharị ahụ. A na-eji ya mee ka mmekọrịta ya na urchin.js nwee ike imekọrịta ihe, nke bụ ụdị Google Analytics nke ochie ma jiri ya na kuki __utmb chọpụta nnọkọ/nleta ọhụrụ.
__utmt 10 nkeji Nchịkọta Google na-edobe kuki a ka ọ gbochie ọnụego arịrịọ.
__ndmv 2 afọ A na-edozi kuki __utmv na ngwaọrụ onye ọrụ, iji mee ka nchịkọta Google nwee ike ịhazi onye ọbịa ahụ.
__utmz 6 ọnwa Nchịkọta Google na-edobe kuki a iji chekwaa isi iyi okporo ụzọ ma ọ bụ mkpọsa nke onye ọbịa ahụ rutere saịtị ahụ.
_gat 2 awa Nchịkọta Google Universal arụnyere kuki a iji gbochie ọnụego arịrịọ ma si otú a na -amachi mkpokọta data na saịtị okporo ụzọ dị elu.
Chekwaa & Nabata